Adhijirka reer Jarmal ee Doberman ma adiga ayuu kuu dhexgalaa eeyga? - Taranka
Adhijirka reer Jarmal ee Doberman ma adiga ayuu kuu dhexgalaa eeyga?
Isku-dhafkan ayaa ah waxa aad heli doonto markaad ka gudubto laba ka mid ah eeyaha ilaalada ah ee loogu jecelyahay adduunka.
Iskutallaab udhaxeysa Doberman Pinscher iyo Adhijir Jarmal ah, Doberman Shepherd waa canaan kalgacal leh oo qoto dheer. In kasta oo muuqaalkiisa cabsi gelinaya, fido-kani runti waa kalgacal iyo indho-indheyn.
Halkan ka ogow wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato nooca Doberman Shepherd.
Taariikhda isku darka adhijirka Jarmalka Doberman
Muxuu u eg yahay Adhijirka Jarmalka ah ee Doberman?
Maxay yihiin Shepherd Doberman Jarmal eeyo isku dhafan sida?
Sida loo daryeelo isku darka Dopherman Jarmalka Shepherd
Adhijirka reer Jarmal ee Doberman ma caafimaad qabaa?
Halkee laga iibsadaa iskudhafka Jarmalka ee Shepherd Doberman?
Eeyo u eg iskudhafka Shepherd Doberman Jarmal
Maxaad u heli kartaa Adhijir Doberman ah?
Sida naqshadeeyeyaasha kale ama eyda isku dhafan, Iskudhafka isku dhafka ah ee 'Shepherd Doberman' ee Jarmalka ayaa laga yaabaa inuu isbeddelo mararka qaarkood 1990s.
Habka ugu fiican ee lagu go'aamin karo sida dhabta ah ee isweydaarsigan ayaa noqon doona in la eego taariikhda, astaamaha iyo xirfadaha labada waalid ee waalidkiis.
La kulan Doberman Pinscher
The Doberman Pinscher noocyada ayaa la sheegay inay ka soo jeedeen Apolda, oo ku taal Thueringen, Jarmalka.
Sanadkii 1890-kii, canshuur qaade magaciisa Karl Friedrich Louis Dobermann , oo noocaas uu hadda magaceeda ka qaatay, wuxuu eegay inuu abuuro nooc la socon kara shaqadiisa, ahaansho eey waardiye daacad ah laakiin sidoo kale wehel wanaagsan .
Wuxuu isku dhafay dhowr nooc, oo ay ku jiraan Rottweiler, Weimaraner iyo Jarmal Pinscher si loo abuuro kii ugu horreeyay ee Doberman.
Dobmann's crossbreed wuxuu sii waday inuu noqdo eey caan ah oo shaqeeya inta lagu jiro xilliyada dagaalka, isagoo u dhaqmaya sida indha indheeyayaal, dhambaalo iyo xamaaliin .
Isticmaalkooda dagaalka waxaa daliil u ah qabuuraha eyda dagaalka ee jasiiradda Guam halkaas oo qabuuro badan oo Doberman Pinscher laga heli karo.
Taranka, loo yaqaan iyaga jaakad jilicsan iyo dhismo isboorti , waxaa lagu daray Naadiga loo yaqaan 'American Kennel Club' (AKC) sanadkii 1908 iyo Doberman Pinscher Club of America ayaa dib loo sameeyay 1921.
Eeyadan caatada ah ee qafiifka ah waxay taagan yihiin 24 ilaa 28 inji (61 ilaa 71 cm) dhererkooduna wuxuu gaaraa 60 ilaa 80 rodol (27 ilaa 36 kg).
Astaamahooda qeexaya waxaa ka mid ah jaakadkooda madow, casaan ama buluug ah iyo dhegohooda toosan, saddex geesoodka qaabaysan ee inta badan xiran, hase yeeshee dhaqankani waa mid duugoobay oo meelaha qaarkood sharci darro ka ah.
La kulan Adhijirka Jarmalka
The Adhijirka Jarmalka abtirsiinta noocyadeeda waxaa lagu raad raaci karaa illaa qarnigii 7aad ee AD ilaa buurta idaha ee Jarmalka.
Si kastaba ha noqotee, waa Kabtan Max von Stephanitz taas ayaa lagu amaanay diiwaangelinta Adhijirka Jarmalka ee ugu horreeyay 1899.
Intii lagu jiray dhammaadkii dhammaadkii 1800, Stephanitz waxay soo saartay eyyo adhijirro ah oo kala duwan si ay u horumariyaan eey loo isticmaali karo si wax ku ool ah shaqada militariga iyo booliska .
Adhijirka Jarmalka ee ugu horreeyay wuxuu si rasmi ah uga diiwaangashan yahay ereyga 'German Sheepdog'.
Sidoo kale sanadkii 1899, kii Ururka Daryeelka Jarmalka ee SV waxaa loo abuuray inay kormeerto taranka Adhijirka Jarmalka. Ujeeddada ururku waxay ahayd in la horumariyo xoolo-raacasho wanaagsan iyo eey shaqeynaya oo dhan.
Markii Dagaalkii Koowaad ee Adduunka qarxay eeydaan waxay ahaayeen loo adeegsaday xamuul dagaal iyo Naadiga Kennel-ka Mareykanka waxay u beddeleen magaca nooca loo yaqaan 'Sheepdog' Jarmalka oo loo beddelay Shepherd Dog si looga fogaado la-xiriirka Jarmalka iyadoo eygu yahay eeyga milatariga ee inta badan la isticmaalo.
Magacan waxaa kaliya loo badalay Adhijirka Jarmalka 1931.
Boqortooyada Ingiriiska dhexdeeda, cawdu waxay ahayd, sida mararka qaarkood weli loo yaqaan, loo yaqaan Alsatian Wolf Hound.
Adhijirka Jarmalka waa a eey weyn oo taagan inta udhaxeysa 22 iyo 26 inji (56 ilaa 71 cm) oo dherer ah culeyskiisuna yahay 75 ilaa 95 rodol (34 ilaa 43 kg).
Noocani eeygu wuxuu leeyahay laba jaakad dherer dhexdhexaad ah oo caadi ahaan toosan oo leh qaabab madow iyo kareem / midab / casaan.
Tani eey aad u xoog badan oo firfircoon qoreysa jirka muruq iyo bowdyo adag oo adag. Qaab dhismeedka jidhkoodu waa afargeesle miskaha oo xoogaa u janjeera.
Waxay qaarkood ku yiraahdaan waxay leeyihiin muuqaal u eg yeey oo ay ugu wacan tahay dhagahooda toosan iyo muuska dheer.
Isku darka 'Shepherd Doberman' ee Jarmalka ayaa leh muuqaal amar ah, oo aan shaki ku jirin . Tarankaani waxaa lagu gartaa jirkooda muruqyada iyo dhaqaaqa oo lagu daro dhagahooda waaweyn ee iskood u taagan.
Wejiyadooda waxay ka muuqdaan muuska dheer, sanka madow iyo indhaha bunni ama madow inta dabadooda ay buuxsantahay waxaana toos loogu qaadaa xoogaa qalooca.
Intee in le'eg ayuu helayaa Adhijirka Doberman?
Sababtoo ah astaamaha waalidkan isweydaarsiga ah, isku darka Doberman Shepherd wuxuu noqon doonaa eey weyn oo celcelis ahaan culeyskiisu yahay 90 illaa 110 rodol (41 illaa 50 kg) iyo dhererkiisu yahay 22 illaa 26 inji (56 illaa 66 cm).
Caadi ahaan dumarka noocani waa kuwo ka yara yar kana caato yar kan ragga, taagan qiyaastii 2 inji oo ka gaaban culeyskeeduna yahay 10 rodol (5 kg).
Xitaa Eyda yaryar ee 'Doberman Shepherd' waa kuwo aad u ballaaran, culeyskooduna wuxuu u dhexeeyaa inta u dhexeysa 25 iyo 30 rodol (12 illaa 16 kg) oo saddex bilood jira.
Eydu waxay bilaabaan inay gaaraan bisil qiyaastii 8-10 bilood jir waxaana loo tixgeliyaa inay si buuxda ugu koraan 24-30 bilood iyadoo dheddigga ay gaarayaan cabbir buuxa oo ka dhakhso badan kan ragga.
Baaxadoodu waxay ku adkayn kartaa la qabsiga tanna waa in maanka lagu hayaa marka eyga laga soo iibsanayo isugeyntaas.
Eydan firfircoon ee waaweyn jecel bay'ada beeraha miyiga halkaasoo ay ku leeyihiin boos ay ku ordaan oo ay ku ciyaaraan, ama ugu yaraan guri leh barxad weyn.
Jaakada Doberman Jarmal Shepherd
Jaakada Jarmalka Shepherd Doberman jaakaddiisu way kala duwanaan kartaa waxyar iyada oo ku xidhan hadba astaamaha waalidkood midka ugu xoog badan.
Koodhadhkoodu wuxuu u ekaan karaa mid gaaban oo dhalaalaya oo doberman's ah ama dhagxan, dherer iyo faaffiir Shepherd Jarmal ah.
Caadi ahaan jaakada Shepherd Doberman waxay noqon doontaa mid gaaban oo dherer dhexdhexaad ah lehna midab madow, bunni ama midab buluug ah, oo badanaa leh qaabab saddexda midab leh.
Eeyadan ayaa kala ah daadiyayaal hoose ama dhexdhexaad ah loomana tixgeliyo eeyo wehel wanaagsan dadka qaba xasaasiyad daran.
Ka gudubka adhijirka Jarmalka oo leh Doberman Pinscher waxay keeneysaa nooc caqli badan oo caqli badan oo waliba leh qulqulo adag, madax-bannaan .
Sababta oo ah eeyahaas taariikhdooda shaqada militariga ah, tababarka waa in la sameeyaa waqti hore, taas oo si aad ah ugu cadaynaysa eeyga masuulka ka ah.
Markaad kasbato daacadnimada isku-darka Jarmalka Shepherd Doberman waxay ku tusi doonaan tooda dhinac jacayl iyo kalgacal leh , si kastaba ha noqotee daacadnimadooda ayaa sidoo kale muujin karta xukun iyo gardarro sidaas darteedna bulsho-dhaqameedka hore ayaa lagama maarmaan u ah isku-dhafka isku-dhafan.
Adhijirka Doberman wuxuu ku dhici karaa walaac kala soocid markii keligiis laga tago.
Ujeeddadan awgeed inuu si daran u daacad noqdo, ayaa Doberman Shepherd uu yahay looguma talinayo qoysaska leh carruur aad u yaryar halka milkiilayaasha eyda markii ugu horeysay laga yaabo inay ku dhibtoodaan inay bixiyaan baahiyaha isku dhafka Shepherd Doberman ee Jarmalka.
In kasta oo uu ku habboon yahay nolosha dibadda, waalidkiis Doberman Pinscher dartiis, Shepherd Doberman kuma fiicna cimilada aadka u qabow waana in lagu hayaa gudaha heerkulka hoose.
Fiiri fiidiyowgan oo ah isku-duwaha Jarmalka ee Shepherd Doberman oo lagu magacaabo Mason, oo si farxad leh u qodaya god:
Haddii aad ka fikireyso inaad hesho Adhijre Doberman ah oo adiga kuu gaar ah waxaa jira dhowr waxyaalood oo aad u baahan tahay inaad maskaxda ku hayso oo aad ku daryeesho xannaanadan weyn ee geesinimada leh.
Layli ku sameeya iskutallaabtaada 'Doberman German Shepherd cross'
Isku darka Shepherd Doberman ee Jarmalka wuxuu leeyahay tamar badan oo wuxuu u baahan doonaa ugu yaraan 90 daqiiqo hawl maalintii. Eeyahaani waxay ku habboon yihiin qoys firfircoon oo isaga ku qaadi doona dhowr socod dheer maalintii iyo sidoo kale orod, socod iyo booqashooyin lagu tago seeraha.
Celcelis ahaan 12 mayl oo socod ah usbuucii ayaa lagula talinayaa firfircoon Doberman Shepherd.
Maaddaama hiddo-wadareedkan loo soo saaray inay noqdaan eey shaqeeya, waxay jecel yihiin inay yeeshaan howl iyo shaqo ay qabtaan. In kasta oo ciyaaro kala duwan ay mashquul ku ahaanayaan, tababarka adeeca sidoo kale waa fikrad wanaagsan tarankaan inuu kiciyo maskaxda.
Shepherd Doberman wuxuu sidoo kale ku fiicnaan doonaa dhaqashada iyo howlaha tartanka.
Jadwalka qurxinta adhijirkaaga Doberman
Maaddaama isku-dhafkani yahay mid dhexdhexaad ah oo dhexdhexaad ah, oo aan ahayn hypoallergenic, waxaa lagugula talinayaa inaad adigu cadayo isku darkaaga 'Sheberd Shepherd' seddex ilaa afar jeer . Waxa kale oo run ahaantii loo baahan yahay oo keliya in lagu maydho noocan iskutallaabta ah markii uu wasakh leeyahay.
La kulan Hammer, Adhijirka Doberman - Isha sawirka
Sababtoo ah waalidkood neceb yahay qubayska, Shepherd Doberman Jarmal ayaa sidoo kale isku qasmay caadi ahaan ma jeclaan doono in la dhaqo oo sidaas u sameeya sida eey waxay kaa caawin doontaa inaad ku tababarto eeygaaga inuu u dulqaato waqtiga qubeyska.
Taasi waxay tiri, cadayashada joogtada ah, iyo sidoo kale nadiifinta dhagaha, ayaa kaa caawin doonta inaad eygaaga caafimaad ku noolaato.
Maaddaama Shepherd Doberman loo soo saaray qaab nololeed shaqeynaya, qurxin badan looma baahna iyo feejignaanta xirfadeed ee saloon ayaan marar dhif ah loo baahnayn.
Maxaad quudineysaa Adhijirkaaga Doberman?
Sida nooc weyn, isku darka Doberman Jarmalka Shepherd ayaa u baahan doona laba jeer quudinta maalin kasta iyadoo wadar ahaan ku saabsan 4 ilaa 5 koob oo cunto ah maalintii .
Sababtoo ah qaab-nololeedka firfircoonaanta iyo firfircoonida, cunnada eyga dabiiciga ah ayaa lagula talinayaa iyo fiitamiinno dheeri ah ama dheeri ah ayaa laga yaabaa inay lagama maarmaan noqoto.
In kasta oo had iyo jeer ay fiican tahay inaad la tashato dhakhtarkaaga xoolaha ee ku saabsan nafaqada, noocyo kala duwan oo dabiici ah ayaa lagu dari karaa kibiskaaga eyga maalin kasta si ay u ahaadaan kuwo caafimaad qaba.
Adhijirka Doberman ayaa si weyn uga faa’iideystaan ​​kalluunka aan lafta lahayn kuwaas oo bixiya borotiinka iyo omega-3 iyo sidoo kale miraha iyo khudradda darayga ah oo ah isha wanaagsan ee fiitamiinnada.
Sababtoo ah asalkooda yeeyga, isku darka Doberman German Shepherd sidoo kale waa musharax wanaagsan a cunnada ceyriinka ah taasoo la sheegay inay kordhinayso heerarka tamarta ayna dhisayso jaakad caafimaad qabta.
Awoodda adag, dabeecadda shaqada ee labada waalid ee waalidkood, isku darka Doberman Jarmalka Shepherd ayaa caadi ahaan ahaan doona adag, eeyo adkeysi leh leh arrimo caafimaad oo yar.
Maaddaama eeygan ay yihiin iskutallaab dhab ah runtiina had iyo jeer way ka caafimaad qabnaan doontaa waalidkeed daahir ahaan sababtuna tahay xoog isku dhafan .
Tani waa geedi socod dhacda marka faracyada isweydaarsiga ay muujiyaan awooda, tayada sare ee labada waalid waalidkood.
Taasi waxay tidhi, saaxiibbadaa nolosha lagu kalsoon yahay waxay u nugul yihiin qaar ka mid ah xanuunnada guud ee eyda.
Walaaca ugu badan waxaa ka mid ah xusulka iyo sinta dysplasia kuwaas oo caan ku ah adhijirka Jarmalka, iyo sidoo kale wadnaha iyo CVI ama Cudurka 'Wobbler's Syndrome' .
Cudurrada kale ee yar-yar ee saameyn ku yeelan kara adhijirka doberman waxaa ka mid ah xannuunka caloosha oo badanaa ku dhaca eeyo waaweyn, iyo sidoo kale osteosarcoma, cataracts iyo dermatitis.
Si la mid ah rajada nolosha inta badan eyda waaweyn, Doberman Shepherds waxay leeyihiin u janjeera noolaa 10 ilaa 13 sano .
Sababta oo ah dabeecadda firfircoon ee isku darka Shepherd Doberman ee Jarmalka, waxaad ku arki kartaa xirashada iyo jeexjeexa eeyahaaga kalagoysyada markay weynaadaan.
Waxaa jira noocyo kala duwan oo dheeri ah oo ka caawin doona adhijirkaaga Jarmalka ah ee Doberman isku dhafka si aad uga gudubto arrimahan, sida saliidaha kalluunka Omega-3 ee horay loo soo sheegay, iyo sidoo kale Vitamin E.
La kulan Adhijirka Jarmalka ah ee Doberman eeyaha isku dhafan - Isha sawirka
Doberman Shepherd eeyaha yaryar waxay caadi ahaan ku kacaan qiyaastii $ 200 ilaa $ 500 at breeder ah.
Si kastaba ha noqotee, markaad iibsaneyso mid ka mid ah eeydan, waxaa muhiim ah in la hubiyo inaad la xisaabtami karto qarashkooda caafimaad ee ugu horreeya iyo tallaallada.
Waad filan kartaa inaad kubixiso ugu yaraan US $ 500 markaad iibsaneyso eeyahaaga oo lagu daro qadar wanaagsan sanadkiiba howlaha iyo cuntada - xusuusnow in noocani ballaaran cuno wax badan!
Doberman Jarmal Shepherd isku darka kiciyeyaasha
Haddii aad jeceshahay wax kasta oo aad akhriday markaa waxaad la yaabi kartaa inaad hesho isku darka adhijirka Jarmalka ah ee Doberman.
A breeder wanaagsan Doberman German Shepherd ayaa kaliya soo saari doona 2-3 qashin sanad. Hubso inaad si fiican u baarto abuurkaaga oo aad booqato boggooda haddii aad rabto inaad ka fogaato arrimaha caafimaadka eeygaaga goor dambe.
Noocyo kala duwan ayaa ku takhasusay isku darka adhijirrada Jarmalka iyo Dobermans iyo noocyo kale si loo abuuro iskutallaabyo ilaalin wanaagsan, sida Doberman Shepherd.
Waa kuwan qaar ka mid ah si ay kuugu bilaabaan raadintaada eeyga saxda ah:
Vom Hismerh Adhijirka Jarmalka iyo Dobermans
Iibinta Eyga Ilaalinta
Doberman Jarmal Shepherd isku dhafan goobaha badbaadinta / korsashada
Iyada oo labada nooc ee waalidba ay yihiin eeyo caan ah, waxaa jira goobo kala duwan oo korsasho iyo xarumo loogu talagalay noocyadan. Xarumahan korsashada iyo samatabbixintu waxay kaloo xayaysiiyaan isku-darka ama iskutallaabta noocyada la heli karo.
Waa kuwan wax yar oo ka mid ah ururada samatabbixinta si ay u bilaabaan raadintaada Doberman Shepherd si aad u wacdid adigu:
Goobaha samatabbixinta adhijirka Jarmalka:
Samatabbixinta Adhijirka Jarmalka iyo Korsashada
Samatabbixinta Adhijirka Jarmalka ee Westside
Goobaha samatabbixinta Doberman ee korsashada:
Samatabbixinta Dobies iyo Cagaha yar yar
Samatabbixinta Doberman ee Triad
Labaduba Adhijirka Jarmalka iyo Doberman Pinscher waxaa badanaa lagala gudbaa noocyo kale si ay u soo saaraan iskudhaf isku mid ah.
Isku darka Shepherd Jarmal ee la midka ah waxaa ka mid ah:
Adhijirka reer Anatolia
Noocyada kale ee caanka ah ee loo yaqaan 'Doberman mix' waxaa ka mid ah:
Isku darka Doberman Collie
Isku darka King Shepherd Doberman
Isku darka Doberman Rottweiler
Dabeecadaha adag ee ilaalin kara eeygan waxay noqon karaan wax fiican iyo wax xun, marka waa muhiim in la dejiyo rajooyin macquul ah. Waxaad ubaahantahay inaad waqti iyo tamar badan uhesho tarankaan laakiin waxay tan ulaheli doonaan daacadnimo daacad ah.
Doberman Shepherd waa xulasho aad u fiican haddii aad raadineyso inaad hesho xayawaan ujeedo nabadgelyo leh isla markaana aad tahay wehel wanaagsan isla waqtigaas.
Miyaad hore u aragtay tan Mise waxaad xilligan leedahay mulkiilaha Jarmalka Shepherd Doberman? Noo soo sheeg waxa ay yihiin iyagoo wadaagaya sheekadaada hoose.
69 Noocyada Eyda Weyn: A-Z Liiska Eeyaha Weyn Ee Cabbir ahaan
Shaaha Poodle: Hagaha Dhamaystiran ee Micro, Teacup & Poodles Toy
Magaca adhijiraha jarmalka ee dumarka
Adhijir Jarmal ah oo timo dheer leh
immisa ayay ku kacaysaa mini labdoodle
shaybaarka jarmalka adhijirka isku darka puppy
Adhijirka Australiyaanka ah ee ciribta buluuga ah ee isku dhafka ah